कोेरोना महामारीका यी अदृश्य कमान्डर : आइसोलेसनमा चौकीदार बनेका हवल्दार
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ‘हटस्पट’ बनेको लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला रुपन्देही हो । जहाँ हालसम्म संक्रमित संख्या ७ हजार नजिक छ ।
वैशाख १९ गते पहिलो पटक रुपन्देही र बाँकेमा एकसाथ १/१ जना संक्रमित भेटिएको प्रदेशमा जेठको पहिलो हप्ता पुग्दा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ४ वटै कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल संक्रमितले भरिए ।
संक्रमण तीब्र रूपमा बढेर अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि बुटवल उपमहानगरपालिले बुटवल–११ देवीनगरस्थित एन्फा एकेडेमीमा संक्रमित तर लक्षण नभएका बिरामीलाई राख्न आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्‍यो ।
अस्थायी प्रहरी चौकी देवीनगरमा रहेर लकडाउन र निषेधाज्ञा कडाइ गर्दै बजारको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको काममा खटिएका प्रहरी हवल्दार खिमविक्रम थापालाई वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गोविन्द रेग्मीले एन्फा आइसोलेसन सेन्टरको सुरक्षा व्यवस्थाको कमाण्ड गर्न खटाए । प्रमुखबाट निर्देशन भएपछि प्रहरी प्रशासनमा किन, हुँदैन, सक्दिनँ, डर लाग्छ भन्नेजस्ता कुरा गरिँदैनन् ।
नेतृत्वबाट आदेश भएपछि मनमा महामारीको त्रास लिएर थापा आफूले काम गर्ने प्रहरी चौकीबाट झण्डै ३ किलोमिटर तल रहेको एन्फा एकेडेमी आइसोलेसन सेन्टरको कमाण्ड सम्हाल्न जेठ ११ गते साँझ एक्लै त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुगेपछि उनलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका १५ जना संक्रमितको सुरक्षाको कमाण्ड गर्ने जिम्मा दिइयो ।
उनी १५ जना संक्रमितलाई ‘रिसिभ’ गरेर एक्लै बसे । आइसोलेसनमा राखेका संक्रमितको जिम्मा थापाको काँधमा आएपछि ‘जे पर्छ टर्दै जान्छ, अब कोरोनासँग डराउने होइन, आएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ’ भन्ने मनोबल र दृढ अठोटसाथ उनले काम शुरू गरे । जेठ ११ गतेदेखि हालसम्म ७ महिना एक्लै कुनै दिन बिदा नबसी थापाले हालसम्म आइसोलेसनमा चौकीदारी गर्दै संक्रमितलाई परामर्श दिएर आत्मबल बढाउँदै कोरोना जिताउने प्रमुख भूमिका खेलेका छन् ।
थापा भन्छन्, ‘शुरूमा कोरोना संक्रमितको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर जानुपर्‍यो भन्दा डर लाग्यो तर संक्रमितसँग नजिक रहेर काम गर्दा कोरोनाको डर पर–पर धकेलिँदै गयो ।’
शुरूआती अवस्था सम्झिँदै हवल्दार थापा भन्छन्, ‘शुरूका ४ दिन म एक्लै बसे । त्यसपछि नगरपालिकाले आलोपालो हुने गरी दिउँसो र रातिका लागि १/१ जना स्वास्थ्यकर्मी पनि खटायो । सुरक्षा व्यवस्थापन, संक्रमितलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खानेकुराको व्यवस्थापनको काम गरे । जेठ दोस्रो हप्तादेखि दिनरात नभनी विगत ७ महिनायता लगातार संक्रमितको सुरक्षामा खटेको छु ।’ थापाले आइसोलेसनमा आएका संक्रमितलाई योगादेखि नृत्य समेत सिकाउँछन् ।
‘संक्रमितको उच्च मनोबल बनाउँदै कोरोना जिताउने हौसला दिइयो । जे गरियो आफ्नै क्षमता र प्रयासबाट गरें । न त फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्दा आफ्नै नेतृत्वमा केही पाए, न त स्थानीय तहले हेरे नै । तर पनि कुनै झर्को र दुःख नमानी नियमित काम गरेको छु,’ उनले भने । जीवनमा केही सिक्नु अनि सिकाउनु नै वास्तविक जीवन रहेको थापाको ७ महिनाको अनुभवनले सिकाएको छ ।
अहिले पनि कोरोनाको लडाइँमा अग्रभागमा खटिएका खिमबहादुरलाई संक्रमणबाट आफू सुरक्षित रहँदै आइसोलेसनमा संक्रमण भएकालाई कोरोना जिताउनु छ । थापा नदेखिएर पनि मुलुकमा कोरोना महामारीलाई कम गर्न संक्रमितको मनोबल बढाउँदै, योग सिकाएर कोरोनामुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर उनको भूमिका त्यहाँबाट कोरोनामुक्त भएर जानेले मात्र देखेको छन् ।
‘कोरोनासँग एकदमै डराउने बेलादेखि अहिलेसम्म एक्लै आइसोलेसनमा बसेर काम गरेको छुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘संक्रमितको अवस्था बुझ्नेदेखि, के आवश्यकता छ, केही अपुग छ कि भनेर सोध्ने पनि गर्छु । प्रहरी सेवामा यस्तो पनि अवस्था आयो संकटमा एक्लै जुधें । आइसोलेसनमा आएका अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आए एम्बुलेन्स खोजेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । दैनिक संक्रमित थपिए ? कति जना निको भएर गए ? निको भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? सबैको दैनिक सूची बनाउनुपर्छ ।’
संक्रमितसँग नजिकै रहेर काम गर्ने क्रममा थापाले आइसोलेसनमा आउने सबैको मन पनि जितेका छन् । ‘आइसोलेनमा नेता, पत्रकार, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, प्रहरी, विद्यार्थी सबै आए कोरोना जितेर गए,’ उनी भन्छन्, ‘निको भएर घर गएपछि पनि मलाई उहाँहरूले फोन गरेर सम्झिनुहुन्छ । ‘दाइ के छ हालखबर ? कति छन् आइसोलेसनमा संक्रमित अनि तपाईले सिकाउने योगका आसनहरू भुलियो कसरी गर्ने’ भनेर पनि सोध्छन् ।’
थापाले बिहान ५ बजे उठेर माइकबाट संक्रमितलाई योग गर्न उठाउँछन् । योग गुरुसँगै आफू पनि योग गर्छन् । झण्डै १ घण्टाको योगपछि उनले नुवाइधुवाई गरेका संक्रमितलाई चिया नास्ता खान ७ बजे माइकबाटै बोलाउँछन् । अनि ज्वरो नापेर तापक्रमण भन्न पनि संक्रमितलाई माइकबाट अनुरोध गर्छन् । त्यसपछि खाना खाने बेला हुन्छ । दिउँसो चिया–नास्ता पछि फेरि दिउँसो ज्वरो नापरे तापक्रम बताउन भन्छन् । साँझ खाना खान पनि माइकबाट बोलाउँछन् ।
उनी अहिले आइसोलेसनमा योगीराजसँग योगा सिक्दा आफू पनि दक्ष भएका छन् । अहिले योगी आइसोलेसनमा नआउँदा उनले नै योगा सिकाउने गर्छन् । उनले भने, ‘अहिले सबै योगका आसन सिकाउन सक्ने भएको छु । सबै आसन जानेको छु ।’
आइसोलेसनको लामो चौकीदारीले थापालाई उच्च मनोबल र हौसला बढाउने, समूहमा बसेर शारीरिक व्यायाम गरे कोरोना जित्न सकिने मनोबल बढाएको छ । आइसोलेसनमा हालसम्म ३०० बढी व्यक्ति भर्ना भए । त्यसमध्ये मंगलवारसम्म ३०० जनाले कोरोना जितेर घर फर्किसके । ३ जनालाई समस्या भएपछि कोरोना विशेष अस्पताल रिफर गरियो । अझै ६ जना आइसोलेसन सेन्टरमै छन् ।
संक्रमित सँगसँगै काम गर्ने प्रहरी र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुविधा एउटै छैन । उनीसँगै काम गर्ने कर्मचारीले जोखिमभत्ता पाउँदा थापाले केही जोखिमभत्ता पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सँगै काम गर्नेले जोखिमभत्ता पाएका छन् । संक्रमितसँगै ७ महिनादेखि काम गरेको मलाई तलबबाहेक १ रुपैयाँ पनि केही आउँदैन । हामीलाई पनि जोखिमभत्ता दिनुपर्ने थियो ।’
संक्रमितको सेवामा खटिएका थापालाई हालसम्म कोरोना देखिएको छैन । उनले हालसम्म २ पटक पीसीआर गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘तल्लो तहमा रहेर पनि बिरामीको कमाण्ड गर्न पाउँदा खुशी छु । देश छिट्टै कोरोनामुक्त होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’
प्रदेशसभा सदस्यको दशैँ भत्ता आविष्कार केन्द्रलाई हस्ता...
गण्डकी प्रदेशमा २४ घण्टामा ७४ जना कोरोना सङ्क्रमित थ...